Gegada Diyaaradaha Magaalada Istanbul Oo Heshiis La Gashay Shirkadaha Diyaaradaha Caalamiga Ah Ee Shiinaha Iyo Kuuriyada Koofureed | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ayaa heshiisyo la saxeexatay Madaarrada Caalamiga ah ee Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed
21 / 11 / 2019 34 Istanbul, 82 Kuuriya (Koonfurta), 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ayaa heshiisyo la saxeexatay Madaarrada Caalamiga ah ee Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed; Marka laga soo tago qaab dhismeedka u gaarka ah, kaabayaasha adag, tikniyoolajiyadda tikniyoolajiyada iyo khibradda safarka ee dhaadheer, garoonka diyaaradaha ee Istanbul, HUB adduunka, wuxuu heshiisyo la galay garoomada caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha iyo Kuuriyada Koofureed.
albaab dunida ee Turkey iyo sano ee hore ee xarunta caalamiga ah, Garoonka Istanbul, halkaas oo sannad walba malaayiin rakaabka la safray Republic Peoples ee Shiinaha ka Maddaarada Shanghai Pudong iyo Shanghai Hongqiao International helay Authority Airport Shanghai ah, iyo South Korea la Airport International Incheon heshiis is faham ah. Heshiisyadaas ka sokow, Maddaarka Istanbul waxay sidoo kale la saxiixdeen heshiisyo walaalo garoon diyaaradeed oo leh Madaarka Caalamiga ah ee Beijing iyo kan Caalamiga ah ee dhawaan laga furay Beijing Daxing.
In duulista gaarka ah ee u dhexeeya Turkey iyo South Korea iyo China u saxiixay heshiisyo iskaashi la sameeyo buundada macluumaadka. Heshiis ayaa laga gaadhay inta u dhaxaysa Madaarka Istanbul iyo garoomada diyaaradda oo su’aal ka taagan tahay wada-xiriir wax ku ool ah, wadaagida macluumaadka, tababarka wareejinta shaqaalaha iyo howlaha suuq geynta wadajirka ah, waxaana la go’aamiyay in la iska kaashado horumarinta adeegyada khibradaha macaamiisha ee shirarka wadajirka ah.
Dhinacyadu waxay awood u yeelan doonaan inay u adeegsadaan maaraynta garoonka, hawlgalka iyo khibradaha ganacsiga guud si ay u horumariyaan una xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya, sidoo kale waxay is weydaarsadaan macluumaadka ku saabsan maareynta garoonka, maaraynta dhinaca hawada, maamulka ganacsiga, qaabeynta qaab dhismeedka, waddo horumarinta iyo qaababka elektiroonigga ah.
Heshiisyada waxaa lala galay garoommada diyaaradaha adduunka ugu hoggaaminta…
2018, oo ah la taliyaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul isla markaana darajayn u ah garoommada diyaaradaha adduunka ugu fiican marka loo eego xogta 3. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Incheon, waa garoonka diyaaradaha ee ugu weyn Koonfurta Kuuriya, waa 68 oo leh rakaab ka badan 18 milyan. Kuwa ugu weyn, marka loo eego xamuulka xNUMX. waa garoonka diyaaradaha ugu weyn. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Beijing, oo ah mid ka mid ah garoomada ugu muhiimsan ee Jamhuuriyadda Dadka, waa 4 oo ay la socdaan in ka badan rakaabka XMUMX adduunka oo dhan. Kuwa ugu weyn, marka loo eego xamuulka xNUMX. waa garoonka diyaaradaha ugu weyn.
Gegada Diyaaradaha ee Shanghai Pudong, oo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee ku xidhan Maamulka Masuuliyiinta Madaarka Shanghai, ayaa ah 74 adduunka ee tirada rakaabka ah ee 9 milyan. kan ugu weyn, marka loo eego xamuulka xNUMX. u taagan yahay garoonka diyaaradaha ee ugu weyn. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Beijing Daxing, oo dhawaan lagu furay awood u leh rakaabka 16 milyan, waa garoon kale oo muhiim ah oo caalami ah kaas oo Madaarka Istanbul uu ku gaadhay heshiis iskaashi.
Tirada duullimaadyada ka imanaya Shiinaha iyo Kuuriyada Kuuriya iyo shirkadaha diyaaradaha ee ajnabiga ahi way sii kordhayaan…
14 duulimaad asbuuciba u dhexeeya Turkey iyo South Korea. Xaaladdan oo tirada this kor u xnumx'y soo galaan Turkey 27 oo leh awood buuxda iyo adeegyada u dhexeeya Airport Istanbul Shiinaha. Himiladu waa in la kordhiyo tirada 36 ku duulaan lagu qabtay dhexeeya Turkey iyo China 2020. Dhanka kale, Shiinaha Koonfurta, Lucky iyo Sichuan Airlines, oo ay ku xigto bilaabashada Shiinaha ee Bariga iyo Juneyao Airlines xagaaga xagaaga ee 48 duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa loo qorsheeyay inay kordhiyaan tirada shirkadaha diyaaradaha Shiinaha illaa 2020.
Turkey waa soo bandhigid suuqa Asian, waxaan ujeedadoodu 5 1 milyan dalxiisayaal sano ah
Kadri Samsunlu, madaxa fulinta iyo maareeyaha guud ee howlgalada garoonka diyaaradaha İGA, oo ugu horeyn booqday Kuuriyada Woqooyi kadibna shacabka Shiinaha si ay u fuliyaan howlo ganacsi iyo heshiisyo garoonka diyaaradaha ah, ayaa cadeeyay in booqashooyinka qaarada Aasiya ay ku mataleyso garoonka diyaaradaha Istanbul ay muhiimad weyn leedahay. “Iyada oo ah IGA, waxaan booqanay Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha waxaanan la galnay heshiisyo muhiim ah shirar wax soo saar leh. Sidaad ogtahay, Ankara, Beijing iyo Seoul iyo Istanbul waa magaalooyin walaalo leh oo ku yaal Shanghai.
Heshiisyadan oo ka wakiil ah garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa sii xoojin doona walaaltinimadayada. Dareen ahaan, waxaan aasaasaynaa xiriir ka dhexeeya heshiisyadii aan la galnay iyo qodobbada ku xusan jidka silk-ta taariikhiga ah ee loo maro 'hawada'. Sidan, waxaan u wadnaa aqoontii aan ku soo marnay anagoo ku mataleyna duulista hawada Turkiga garoonka caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee HUB. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan aragno in deeqaha heshiisyada ay ka yimaadaan garoomada diyaaradaha. Waxaan aragnay sida ugufiican ee aan ugu adeegi karno rakaabka ka socda Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed, waan hirgelin doonnaa. Our Ujeedada; In laga qaybqaato dalxiiska dalkeenna iyadoo la wadaago saamiyada badan ee taraafikada rakaabka ee ku qulqulaya Yurub. 5 Waxaan higsaneynaa inaan keeno 1 milyan oo dalxiisayaal ah oo ka socda Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha sanadkasta dalkeena oo aan abuurno shabakad halkaas oo qiyaastii 15 milyan oo rakaab ah oo Shiinees ah oo u safraya Yurub ay uga soo safri karaan garoonka diyaaradaha Istanbul halka loo wareejinayo.
Tareenka xawaaraha sare ee South Korea
Garoomada Diyaaradaha ee Istanbul iyo Antalya oo Duulimaad Sare ah Bishii Agoosto
Boqolkiiba Isboortiga 6,2 ee Duulimaadyada Yurub…
UTİKAD 'Iskaashatada Warshadaha Iskuulada' Istanbul Model '…
Caalamiga ah ee Madaarka cusub ee Istanbul…
Wadada Gaadiidka Caalamiga ah ee Casriga Cas-Cas…
Wasiirka ayaa siiyay injiilka! .. Garoomada diyaaradaha Nidaamka Tareenka
1 saacado bilaash ah oo la dhigto garoomada garoonka diyaaradaha ee ISPARK
Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha
Madaarka Caalamiga ah ee Hongqiao
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Beijing Daxing
garoomada diyaaradaha caalamiga